အဝေးပြေးလမ်းပေါ်က ထူးဆန်းတဲ့ အကောင်လေးကို ခွေးလို့ အထင်မှားပြီး အိမ်ခေါ်မွေးခဲ့တဲ့ အမျိုးသား - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingအဝေးပြေးလမ်းပေါ်က ထူးဆန်းတဲ့ အကောင်လေးကို ခွေးလို့ အထင်မှားပြီး အိမ်ခေါ်မွေးခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
June 12, 2020 Yan Amazing 0
Shwe Khit ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်း အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုအကြောင်း ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ အဖြစ်ကတော့ အမျိူးသားတစ်ယောက်ဟာ လမ်းမပေါ်မှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ အကောင်လေးကို ခွေးလေးထင်ပြီး အိမ်ခေါ်မွေးခဲ့တဲ့ အမျိုးသားကနေ စတယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပါ။ ဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်ပျက်သွားလဲဆိုတာကတော့ အောက်မှာ ဆက်ပြီး ဖတ်ပေးပါဦးနော်…. shwekhitonlinetv.com
ဂျပန်နိုင်ငံသား တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Marcy pm အဝေးပြေးလမ်းမှာ ကားမောင်းနေရင်း ရုတ်တရက် အဖော်မဲ့နေတဲ့ အကောင်လေးတစ်ကောင်ကို တွေ့လိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ Marcy ကားကို ရပ်လိုက်ပြီး အကောင်လေးကို ကြည့်လိုက်တော့ ခွေးလေးတစ်ကောင်လို့ ထင်ထားသွားပြီး အိမ်ခေါ်မွေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူ့အိမ်မှာ ခေါ်ပြီးမွေးလိုက်တဲ့ ခွေးလေးအကြောင်းကို Twitter မှာတင်လိုက်ရာက အဖြစ်မှန်ကို သိသွားပါတော့တယ်။ shwekhitonlinetv.com
ဒါပေမယ့် Marcy တင်ထားတဲ့ Post အောက်မှာ မန့်ထားတဲ့ Comment ပေါင်းများစွာထဲမှာမှ တစ်ယောက်ကတော့ “ ဒါမြေခွေးမဟုတ်ဘူးလားလို့ ”ပြောတော့မှ သူလည်း သတိထားမိသွားပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ တိရစ္ဆာန်အကြောင်း နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့သူဆီ အကောင်လေးကို ပြတော့မှ မြေခွေးအမ ပေါက်စလေး ဖြစ်နေမှန်း အတည်ပြုခဲ့လိုက်ရပါတယ်။ Marcy လည်း ဒီမြေခွေးအမလေးကို အိမ်မှာမွေးထားချင်ပေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေအရ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေကို အိမ်တွင်းနွေးမြူခွင့်မရှိတာကြောင့် နောက်တစ်နေ့မှာတော့ တောထဲကို ပြန်လွှတ်ရပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
လူတော်တော်များများက Marcy ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပေးခဲ့ကြပြီး တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို နောက်ပိုင်းမှာလည်း များများကယ်တင်ပေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း အခုလို ထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတွေကို ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးပါဦးနော်…. shwekhitonlinetv.com
ကမ္ဘာပေါ်က အပျင်းအကြီးဆုံး တိရိစ္ဆာန် (၆) မျိုး